Obodo, mba na-agbanye akwụkwọ / akwụkwọ ntanetị
Obodo, mba, oghere mmiri / akara ngosi
Achịchị obodo Land River na aro ngwọta
Osimiri Land Land bụ n'ezie egwuregwu nke ị na-adịghị mkpa maka nkwadebe dị ukwuu. Otú ọ dị, otu ndebiri maka City Country River bụ ihe bara uru ka ị nwee otu isi ihe mgbe ị na-egwu egwu ma onye ọ bụla nwere ike itinye uche na egwu.
Obodo, mba, oghere mmiri / akwụkwọ ntanetị maka akwụkwọ obibi
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa oge ebe a, ị nwere ike ibudata ma bipụta ndebiri n'efu ala maka Stadt Land Fluss. Na ịpị na njikọ ahụ ga-emepe akara ngosi kwekọrọ na pdf usoro maka mbipụta n'efu ma ọ bụ dị ka ihe ngosi
Osimiri osimiri obodo obodo
isiokwu nchịkọta dịka pdf
Biko kpọtụrụ anyịma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ụdị egwuregwu gị ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị nweghị isiokwu maka ibe agba.
Obodo na-agba mmiri ụgbọ mmiri
Obodo dị iche iche na-egwu mmiri
Obodo obodo na-agbanwe mmiri mmiri n'obodo
Obodo obodo osimiri ngwọta ụmụ anụmanụ
Obodo obodo mmiri ngwọta ngwaọrụ